भदौ भित्रै आफ्ना माग सम्वोधन नभए पार्टी छाड्ने योजनामा एमाले असन्तुष्ट नेताहरु
आफ्ना नौ बुदेँ माग पार्टीले भदौसम्म सम्वोधन गरि सक्नु पर्ने एमाले भित्रका असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुले नेतृत्वलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । जनजाति नेताहरुले स्थायी समितिमा आफ्ना माग छलफल हुनु पर्ने अडान लिएपछि एमालेले शनिबारदेखि स्थायी समितिको बैठक बोलाएर ती माग बारे छलफल गर्ने भएको छ । माग भदौ महिना भित्रै सम्वोधन नगरिए पार्टीबाट सामूहिक रुपमा जनजाति तथा मधेशी नेताहरु बाहिरिने उनीहरुले बताएका छन् । पार्टीलाई माग सम्वोधन गर्ने अन्तिम अवसरका रुपमा समय दिएको र यो समयमा पनि माग सही रुपले सम्वोधन नभए पार्टी भित्रै बस्नुको औचित्यता सकिने एमालेका नेता रामचन्द्र झाले बताए ।
असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुको माग सम्वोधन गरि पार्टीमै राख्न प्रयास थाले पनि एमालेले संघीयता बारेको आफ्नो अडान त्यागी सकेको छैन । जनजाति नेताहरु पहिचान सहितको संघीयताको अडानमा उभिएका छन् भने एमालेले बहुपहिचानमा आधारित संघीयता पार्टीको आधिकारीक अडान भएको बताउँदै आएको छ । एमालेले जनजाति नेताहरुलाई पार्टीको नीति विपरीत बोलेको भन्दै अहिले स्पष्टिकरण समेत लिइरहेको छ । तर, स्पष्टीकरण सोधिएका कतिपय नेताहरुले पार्टीलाई स्पष्टीकरण समेत दिएका छैनन् ।
आफ्ना मागबारे पछिल्लो समय पार्टीले चासो लिएकाले बैठकमा उपस्थिति जनाएको एमाले नेता पृथ्वी सुब्वा गुरुङले बताए । केही समय अगाडिदेखि जनजाति नेताहरु पार्टीको बैठकमा समेत सहभागिता जनाएका थिएनन् ।
Last Updated on Friday, 31 August 2012 02:12
आदिबासी जनजातिले अस्ट्रेलियामा भिम रावललाई कालो झन्डा देखाउने प्रेस बिज्ञप्ति सहित
Protest against Bhim Rawal
This is to inform you that the Nepalese Indigenous Nationalities Forum Australia (NINFA) is going to holdapeaceful protest against the Leader of the CPN-UML , Mr. Bhim Rawal who is one of the well recognized person as an Anti-Federalism, Anti-Identity based Federal State andamurderer of the Constituent Assembly of Nepal to whom invited by the organizers( Nepali Embassy to Australia, Nepalese Consulate to NSW and NRNA Australia) to the "Nepal Festival and Regional conference of NRNA Australia 2012".
Therefore we hereby request to all who are in favor of Federal Democratic Republic of Nepal, Identity and dignity and Pluri-Nationalism to support this peaceful protest for awareness .
Venue:Tumbling Park, Darling Harbour
Nepalese Indigenous Nationalities Forum Australia (NINFA).
Last Updated on Thursday, 30 August 2012 08:11
राजावादीहरु फेरि जुट्दै
राजनीतिक दलहरुले मोर्चा बन्दी गर्ने लहर चलाइरहेका बेला राजावादीहरु समेत नयाँ मोर्चा बनाउँन कम्मर कसेर जुटेका छन् । राजावादी दलको रुपमा आफूलाई चिनाएका राजनीतिक दलहरु राप्रपा नेपाल, राप्रपा र जनशक्ति पार्टी बीच एकता हुने निश्चित भएको छ । राजतन्त्रको समयमा एउटै पार्टी रहे पनि पछि त्यही पार्टी फुटेर तीन पार्टीमा विभाजन भएको थियो । पार्टी एकताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको स्रोतले बतायो । जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाको निवासमा तीनै दलको बैठक बसेर पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने निर्णय भएको छ । पार्टीको नाम, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता तथा गणतन्त्रको विषयको आपसी विवाद समेत छिट्टै नै महाधिवेशन गरि टुंग्गो लगाउँन सहमति भएको बुझिएको छ । राजनीतिक गतिरोध लम्बिरहेको बेला राजावादीहरुको सक्रियता एकाएक बढ्नुलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । संघीयता र गणतन्त्र संस्थागत बनिनसकेको अवस्थामा राजावादीहरुको बढ्दो चलखेलले किनारा लागि सकेको राजसंस्थालाई विउँताउने हो कि भन्ने आशंका समेत गर्न थालिएको छ ।
Last Updated on Tuesday, 28 August 2012 02:18
एमालेमा जिम्मेवारी नपाएका पूर्व सभामुख नेम्वाङ् वकालतमै फर्किए
विघटित संविधानसभाको सभामुख सुवास नेम्वाङ् एमाले पार्टीबाट कुनै जिम्मेवारी पाउँन नसके पछि वकालत पेशामै पुनः फर्किएका छन् । विगत छ बर्ष अगाडि सक्रिय रुपमा वकालतमा लागेका उनी आफ्नो पेशालाई निरन्तरता दिदै बुधबार सर्बोच्च अदालत पुगेर मुद्धाको बहस गरे । सिमेन्ट उद्योगीको तर्फबाट सरकारले लागू गर्न लागेको नियम विरुद्ध दायर रिट माथि नेम्वाङले बहस गरेका हुन् । उनले संविधानसभा विघटन भएपछि राज्यसत्ता डट कमसंगको अन्तर्वातामा नयाँ संविधान बोकेर सर्बोच्चमा बहस गर्न जाने इच्छा अधुरै रहेको बताएका थिए । संविधानसभा विघटन पछि फुर्सदिला नेम्वाङलाई एमाले पार्टीले कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन । राज्यसत्तासंग कुरा गदै उनले पार्टीले जिम्मेवारी नदिएको प्रति गुनासो गरे । ‘पार्टीले किन जिम्मेवारी दिएन भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छैन ’ उनले यति मात्र भने । पार्टीका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो क्षमता र हैसियत अनुसार पेशा व्यवसाय गरेर राजनीति गर्नु पर्ने समेत उनले बताए । ‘राजनीति गर्दा जनतालाई भार पर्ने गरि गर्नु हुन्न त्यसैले मैले वकालत र राजनीतिलाई संगै अगाडि बढाउँन चाहेको हुँ ’ उनले राज्यसत्तासंग भने । एमाले भित्र असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुले पार्टी भित्र अलग बैचारिक समूह बनाएर नयाँ पाटी खोल्ने उद्घोष गरे पछि जनजाति नेताहरुले समाल्दै आएको जिम्मेवारी समेत खोसेर एमाले भित्रका बाहुन नेताहरुले समाल्दै आएका छन् । नेम्वाङलाई अहिलेसम्म पार्टीमा कुनै जिम्मेवारी नदिइनु जनजातिहरुलाई जिम्मेवारीबाट अलग राख्न एमालेले खोजेको प्रष्ट हुन्छ । जनजाति नेताहरुको एमाले पार्टीप्रति दुरी बढिरहेका बेला भद्र, शालिन र आफ्नो पेशामा आँटिलो परिचय बनाएका नेम्वाङ समेत एमालेप्रति सन्तुष्ट छैनन् । पार्टीप्रति असन्तुष्ट नेम्वाङ एमाले पार्टी छाड्ने सुरमा भने छैनन् । छिट्टै आकार पाउँन लागेको नयाँ पार्टीमा संम्लग्नता नरहने बताए पनि लोकतन्त्रमा नयाँ विचार जन्मिनु राम्रो भएको उनले प्रतिक्रिया दिए । संविधानसभा विघटन लगतै पार्टीको काममा सक्रिय रहने बताएका नेम्वाङले अहिले सम्म पार्टीले कुनै जिम्मेवारी नै नदिनु नेम्वाङलाई एमालेले पार्टीमै राख्न नचाहेको वा भूमिका विहीन बनाएर राख्न खोजेको हो प्रष्ट बताइरहेको छैन । शालिनदार व्यक्तित्वका धनी मानिए पनि संविधानसभा विघटन हुनुमा नेम्वाङको कमजोर भूमिका जिम्मेवार रहेको भन्दै सार्वजनिक रुपले उनको आलोचना भैरहेको छ ।
Last Updated on Thursday, 30 August 2012 03:15
२४ जना दुश्मन मांरे : भी सी लिम्बु
भिम बरही मगर, २६ अगष्ट, भारतिय भूतपुर्व गोर्खा सैनिक संगठन हंगकंगले आयोजना गरेको भी सी स्मृति सांझ दोस्रो कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्या ग्रहण गरी सम्बोधनको क्रममा भी सी राम बहादुर लिम्बुले २४ जना बैरीको एकै चिहान बनाएको बताए । २१ नोभेम्वर १९६५ मा इन्डोनेशियामा लडाइ लड्दा म दश गोर्खा पल्टनमा लान्स कर्पोरल भएकोले मेरो कमान्डमा भएको अगाडिको साथी टाउकोमा गोली लागेर ढल्यो भने पछाडिको साथी पेटमा गोली लागेको रहेछ र आन्द्रा भुडी नै भुइ भरी भैराखेको रहेछ । अनि उनीहरुलाई घिसार्दै लगेर दुवै जनालाई सुरक्षित एकै ठाउंमा राखे । अनि दुइवटा ग्रीनेड मुखले पीन तानेर दुश्मनको बंकरतिर फाले । त्यो ग्रीनेड दुश्मनको बंकर भित्र छिरेछ र बंकर नै उडाइ दियो, त्यसपछि बांकी रहेकोलाई गोली हानी मारे । त्यसैले म भी सी पाउन योग्य भएछु र पल्टन फर्केको दुइ महिनापछि मलाई दिने घोषणा भयो, यसरी पाए । भी सी लिम्बु परीवार सहित हाल यू के बसोवास गरी रहेका छन तर हंगकंग आउदा भने नेपाल हुदै श्रीमतीका साथ आएका हुन ।
कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि चर्चित लोक गायिका संगीता थापा मगर, चर्चित लोक गायक राज गुरुङ र आधुनिक गीतका चर्चित गायक शम्भु राईलाई नेपालबाट ल्याइएको थियो । लोक तथा आधुनिक गीतले हल निकै जमेको थियो । स्थानिय कलाकारहरुले पनि गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । संघकै भू पु सदस्यहरुद्धारा टेवल ड्रील र खुकुरी नृत्य रोचक रुपमा प्रस्तुत गरीएको थियो । हल पनि दर्शकहरुको खचाखच भिडले भरीएको थियो । कार्यक्रम संयोजक मुक्काजी गुरुङलाई कार्यक्रम सफल रह्यो र किन भी सी सांझ गर्नु भयो भन्दा यो भी सी को सम्मानको लागि गरीएको बताए ।
याउ मा तेई कम्यूनिटी हलमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरी समापन सम्बोधनमा अध्यक्ष जंग बहादुर गुरुङले सवैलाई धन्यावाद दिएका थिए । उपाध्यक्ष जजिन चाम्लिङले स्वागत मन्तब्य दिएका थिए भने सचिब दर्योधन लिम्बुले सञ्चालन गरेका थिए । भी सी लिम्बुलाइ सम्मान पत्र र दुवोको माला पहिर्रयाएर सम्मान गरीएको थियो । अन्य अतिथिहरुमा गेसोका अध्यक्ष पदम बहादर गुरुङ तथा भारतिय बाणिज्यदूत चन्द्र भाङ लगाएत हंगकंगका विभिन्न संघ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि, ब्यापार ब्यबसायीहरु रहेका थिए ।
Last Updated on Tuesday, 28 August 2012 07:08
एमाले अध्यक्ष खनाललाई जनजाति महासंघ कतारको विरोध पत्र सहित प्रेस विज्ञप्ति
संघीयता र पुन : संरचनाको विवाद सल्टाउने जिम्मा कांग्रेस नेता तामाङलाई
बहु पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा कांग्रेस भित्रका जनजाति नेताहरु
एमाले भित्रका जनजाती नेताहरुले एकै पटक राजीनामा दिदै छौ : रकम चेम्जोङ